यो महंगीमा हामीलाई सम्झनुस्, रेष्टुरेण्टको भन्दा राम्रो खाना ६० रुपैयाँमै खुवाइदिन्छौ ! « Surya Khabar
यो महंगीमा हामीलाई सम्झनुस्, रेष्टुरेण्टको भन्दा राम्रो खाना ६० रुपैयाँमै खुवाइदिन्छौ !
-सिंहबहादुर मोक्तान, युवा उद्यमी, सिएम एस हस्पिटलिटी
काठमाण्डौं यसबेला चरम मंहगीले ग्रस्त शहर हो । सार्वजनिक स्थानका चाहे पसल हुन् वा होटल ती सबैमा चरम महंगी देख्न सकिन्छ । सर्वसाधारणले किनमेल गर्ने उपभोग्य वस्तुदेखि होटलको सामान्य खानासमेत पछिल्लो समय निकै महंगो हुँदै गएको छ । यही चरम महंगीको चपेटामा सर्वसाधारणहरु परिरहेको बेला केही युवाहरुले एउटा उदाहरणीय कामको सुरुवात गरेका छन् । काठमाण्डौ बाहिरका विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यकामा आई सिंहबहादुर मोक्तान लगायतका युवाहरुले यसबेला होटलमा खाना र खाजा खाने शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी लगायत सर्वसाधारणहरुलाई निकै राहात हुने किसिमले एउटा अभियानको सुरुवात गरेका छन् ।
मकवानपुरबाट केही वर्षअघि काठमाण्डौ छिरेका मोक्तानको नेतृत्वमा कविन्द्र नापित, सन्तोष रञ्जितकार, मानप्रसाद भट्ट, राज श्रेष्ठ, शुसिला लामा लगायतका युवाहरु काठमाण्डौ सिंहदरबारभित्रको अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीदेखि उपत्यकाका चार ठाउँका शिक्षक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणहरुलाई तारे होटलको स्तरमा तर निकै सस्तो मुल्यमा खाना र खाजा खुवाइने होटल (क्यान्टिन)अभियानको सुरुवात गरेका छन् । करिब ४ वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको यो अभियानले यसबेला चरम महंगीको मारमा परेका शिक्षक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणहरुलाई निकै राहात दिइरहेको छ ।
विदेश जाने सपनालाई त्यागेर स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यका साथ खटिरहेका उनीहरुको क्यान्टिनमा एउटा खानाको ७० रुपैयाँ पर्ने गर्छ तर खाना भने रेष्टुरेन्टको स्तरभन्दा माथिको हुन्छ । उनै उद्यमीहरुमध्ये सिंहबहादुर मोक्तानसँग सुर्यखबर डट् कम्का प्रतिनिधिले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ मोक्तानसँगको गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
–सत्तरी रुपैयाँमा खाना खुवाउँदा फाइदा हुन्छ त ?
हामीले हाई मार्जिन राखेर काम गर्दैनौ । फाइदा हुन्छ । क्यान्टिन चलाउँदा भाडा नतिर्नुपर्ने प्रचलन छ, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई सस्तोमा खाना खुवाउन सहज हुन्छ । हामीले फाइदा मात्रै गर्ने गरी भन्दा पनि सेवा गर्ने हिसाबले पनि काम गरेका हौं ।
–सस्तो खानामा सरसफाई लगायतका कुराहरुमा कमजोरी हुन्छ भनिन्छ नि ?
हो, अरु क्यान्टिनहरुमा आफ्नै परिवारका सदस्यहरु बुढाबुढी छोराछोरीले काम गरेर ग्राहकको सेवा गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा सरसफाई लगायतका कुराहरुमा उनीहरुले त्यति ध्यान नदिएको देखिन्छ । तर हामीले काठमाण्डौमा चारवटा क्यान्टिनहरु सञ्चालन गरिसकेका छौ, जसमा ४० जनाभन्दा बढी स्टाफहरुलाई राम्रो तलब दिएर राखेका छौ । हाम्रो क्यान्टिन मुलुककै उदाहरणीय बनाउने योजनामा हामी छौ । सरसफाईको विषयमा कसैले शंका गर्नै पर्दैन् । त्यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो ।
– तपाईहरुले खाना मात्र सस्तो होकि अन्यमा पनि त्यस्तै हो ?
होइन, हाम्रोमा सादा खाना कतै ६० रुपैयाँ त कतै ७० रुपैयाँमा खुवाइरहेका छौ । चिकेन ममको समेत प्रतिप्लेट ७० रुपैयाँनै छ । तपाईले बाहिर बुझ्नुभयो भने चिकेन ममलाई १ सय ५० भन्दा तल पाउनु हुन्न् । अब खानाको कुरा गर्नुभयो भने यदाकदा यही मुल्यमा पाइएला तर हाम्रो स्तरको गुणस्तर भएको खाना पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । फेरि अर्को कुरा के छ भने हामी निकट भविष्यमा राजधानीमा ५ सयभन्दा बढी क्यान्टिनहरु सस्तो मुल्यमा र गुणस्तरीय खाना र खाजा खुवाएर, थोरै मात्रै फाइदा खाएर सेवा गर्ने अभियानमा छौ । हामी चाहान्छौ, ग्राहकहरुको सुझाव र सल्लाह हामीलाई आइरहोस्, जसले गर्दा हाम्रा गल्ती र कमजोरीहरु सुधार्न सकौं । बाहिरको भन्दा हाम्रोमा सबै कुरा सस्तो छ ।
यस्तै गुणस्तरको खाना मोक्तानको क्यान्टिनमा पाइन्छ:-
–जम्मा लगानीचाहि कति गर्नुभएको छ नि ?
चारवटा क्यान्टिन गरेर करिब ५० लाख लगानी छ ।
–तपाईहरुका क्यान्टिनहरुचाहि कुन–कुन ठाउँमा छन् नि ?
एउटा सिंहदरबारभित्रको अर्थमन्त्रालयमा छ । अरु तीनवटा काठमाण्डौका कलेजहरुमा रहेका छन् । तीमध्ये इन्टरनेश्नल स्कुल अफ टुरिज्म एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज, मिड भ्याली इन्टरनेश्नल कलेज लगायतमा हाम्रा क्यान्टिन सञ्चालित छन् । निकट भविष्यमानै हामीले केही ठाउँहरुमा क्यान्टिनहरु सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौ ।
–अब विदेश नजाने त ?
हाम्रो ६ जनाको समुह कटिबद्ध भएर स्वदेशभित्रै केही गर्ने भनेर लागेको छ । हाम्रो टिममा सन्तोष रञ्जितकार केही दुवई बसेर आउनुभएको हो । अरु साथीहरु विदेश गएका पनि छैनौ र विदेश जाने मोह पनि छैन ।
–तपाईहरुका कोही साथीहरु अमेरिकामा बसेर करोडौं कमाएको देख्दा कहिलेकाही दुःख लाग्दैन ?
किन दुःख लाग्ने ? हामी हाम्रो आफ्नो काममा विश्वास गर्छौ । साथीहरुले वैदेशिक रोजगारमा मात्र होइन, नेपालमै बसेर पनि करोडौं कमाएका उदारणहरु पनि प्रशस्त छन् । यहाँ पैसा पनि कमाउन सकिन्छ र खुसी पनि हुन सकिन्छ । तर विदेशमा पैसा कमाए पनि खै त खुसी ? खै परिवार ? समस्या अमेरिका गए पनि छ, दुबई गए पनि छ । आफु नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तै गर्नेलाई जहाँ पनि छ । गर्न नसक्नेका लागि संसारका कुनै पनि कुनामा ठाउँ छैन । हामी आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेका छौ । विश्वास छ एक दिन हामीलाई सफलता मिल्ने छ ।
–प्रसंग बदलौ, तपाई राजनीतिबाट कत्तिको प्रभावित हुनुहुन्छ ?
म पनि यो देशमै बस्ने नागरिक हो, असर त गर्छ नै । तैपनि कुनै पनि पार्टीको झण्डा बोकेर हिडेको छैन । सबै पार्टीलाई उत्तिक्कै सम्मान गर्छु । युवाहरुलाई सरकारले मात्र रोजगार दिने भन्दा आफै आत्मनिर्भर बन्नेतिर लागौं, बरु मुलुक बनाउनेतिर लागौं । वैदेशिक रोजगारमा गएर अलिकति सम्पति जोड्ने र घरपरिवार बर्बाद पार्ने काम बन्द गरौं । सरकार र राजनीतिक क्षेत्रले त्यो खालको वातावरण बनाइदिओस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
–तपाईको अन्तमा भन्नुपर्ने केही छ ?
म एउटा साधारण उद्यमीको नाताले संसारभर रहनुभएका नेपालीहरुलाई यो आग्रह गर्न चाहान्छुकि नकारात्मक सोचभन्दा माथि उठेर स्वदेशमै आएर केही उद्यम गरौं, देशलाई पनि केही दिऔं र आफु पनि केही लिऔं । स्कुल पढ्दैदेखि अभिभावकले बच्चालाई विदेश पठाउने सोच राख्ने, बच्चाले पनि विदेश जाने मनसाय बनाउने, विद्यालयको शिक्षा समेत वैदेशिक रोजगारका लागि अभिप्रेरित गर्ने खालको हुनेलाई सम्बन्धित सबै पक्षले चिन्न जरुरी छ । यस्तै हो भने अहिले गाउँमा युवाहरु पाइदैन । केही समयपछि शहरमा समेत युवाहरु खाली हुनेछन्, त्यसपछि के हुनेछ आफै कल्पना गर्नुहोस् ।